“Kuwa neceb Liverpool waxay doonayaan in la joojiyo horyaalka” – Gary Lineker – Gool FM
Dajiye March 31, 2020
(England) 31 Mar 2019. Halyeyga kubadda cagta Ingiriiska iyo kooxda Tottenham Hotspur ee Gary Lineker ayaa aaminsan in kaliya kuwa neceb Liverpool ay doonayaan in la joojiyo xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League.
Xiriirka kubadda cagta Ingariiska ee FA-ga ayaa horey u shaaciyey in ciyaaraha oo dhan la hakiyay ilaa iyo 30-ka April, ugu dambeyn, si loo yareeyo halista faafaha Coronavirus, waxayna arrintan albaabka u furtay suurtagalnimada lagu kansali karo gabi ahaanba horyaalka.
Haddaba wargeyska “Mirror” ayaa wuxuu soo xigtay hadalada Gary Lineker kaddib wareysi uu bixiyay, waxaana uu yiri:
“Waxaan u maleynayaa inay fiicnaan laheyd in dhameystiro horyaalka, macno ayey sameyn doontaa”.
“Waxaan dib ugu laaban karnaa ciyaarista mar kale bisha June.”
“Tani waxay gacan ka geysan doontaa dhammaystirka horyaalada xitaa haddii aysan ku habboonayn kubbadda cagta.”
“Tani waa waxa qof walba doonayo inuu sameeyo, marka laga reebo taageerayaasha Liverpool aan jecleyn”.